Buddha ozizi na okpukpe enweghị ike ịzọpụta a Buddha mọnk na Myanmar | Apg29
Buddha ozizi na okpukpe enweghị ike ịzọpụta a Buddha mọnk na Myanmar
"M ghọrọ ike ọgwụgwụ, da amaghị ihe ọ bụla na-ekpe na ahu na nwụrụ."
Eze sịrị: Ee, ọ bụ ezi onye nkụzi, ma ọ na-ekweghị na Jizọs Kraịst. Ya mere, ọ bụ na hell. A gwara m ka hụ nwoke ọzọ bụ onye na-ọkụ, na-ebu a na uwe mwụda ma jụọ;: em bụ nwoke a? Ọ zaghachiri, sị: Ọ bụ onye ị na-efe Gautama Buddha!
My aha bụ onye iberibe peon Chantal Pulu si Myanmar, a mụrụ na 1953 na ochie Burma. Mgbe ọ dị afọ 18, e zigara m a Buddha obibi ndị mọnk, na ghọrọ na 19 afọ a ezigbo onye mọnk. Ebe obibi ndị mọnk bụ agadi mọnk, ndị kasị ama na dum nke Myanmar, akwa andikpep. Na 1983, ọ nwụrụ n'ihe mberede ụgbọala, na ya eju onye ọ bụla.
Etinyere m na-kasị mma mọnk na-eso ụkpụrụ niile nke Buddha. M chọrọ agọnahụ m ọdịmma onwe echiche na ọchịchọ, gbanahụ ọrịa na-ata ahụhụ ma na-enwe free si ụwa circuit. Agha afọ na-kasị mma onye mọnk, na ya agaghị emerụ ihe ọ bụla ndụ.
My ndụ e mepụtara ka a mọnk ruo mgbe m nwetara ezigbo ọrịa, biarue ụlọ ọgwụ. The dọkịta kwuru na m nwere ma odo fever na ịba, na mgbe 1 ọnwa, ọ ghọrọ njọ. O kwuru na e nweghị ụzọ na-ike, na dere m iji kwadebe maka m ọnwụ.
M ghọrọ ike ọgwụgwụ, da amaghị ihe ọ bụla na-ekpe ahụ na nwụrụ. My uche ziri ezi na nke mmụọ n'ụzọ zuru ezu na-amụ anya, m bịara na a ógbè ebe a siri ike ifufe adaha ruo mgbe ọ dịghị osisi ma ọ bụ ihe ọ bụla nọgidere. M na-eje ije ngwa ngwa tinyere a n'efu odida obodo ahụ naanị ya.
Mgbe a mgbe m na-agafe a osimiri na-ele anya gafee a egwu ọdọ ọkụ. Na okpukpe Buddha, anyị enweghị uche nke a ebe dị na. Amaghị m ihe ruo mgbe m hụrụ a demon. Iru-ya di ka ọdum, dị nnọọ ọhịa na ụkwụ dị ka agwọ. M egwu nke ukwuu na ịma jijiji na-, m jụrụ ya aha ya.
Ọ zara, sị: Mụ onwe m bụ eze hell, na Mbibi. Ọ gwara m ka m anya n'ime ọdọ ọkụ, na hụrụ saffron odo acha uwe mọnk na-eyi. M anya nso na idet isi nke nwoke na hụrụ na ọ dị Akiane, ama mọnk ndị nwụrụ n'ihe mberede ụgbọala 1983rd
M jụrụ eze hell mere m na mbụ ndú e anọzi a ọdọ mmekpa, na ọ bụ ezi onye ndú. O nwere a ozizi a na-akpọ: "Ọ bụ gị bụ nwoke ma ọ bụ a nkịta?", Ahụ nyeere 1000s nke ndị mmadụ na-aghọta uru nke mmadụ dị nnọọ mma karịa ụmụ anụmanụ.
Eze sịrị: Ee, ọ bụ ezi onye nkụzi, ma ọ na-ekweghị na Jizọs Kraịst. Ya mere, ọ bụ na hell. A gwara m ka hụ nwoke ọzọ bụ onye na-ọkụ, na-ebu a na uwe mwụda na jụrụ, sị: Ònye bụ nwoke a? Ọ zaghachiri, sị: Ọ bụ onye ị na-efe Gautama Buddha !! M nke iwe iwe na-ahụ Buddha na hell na mkpesa: O nwere a ọma ụkpụrụ ọma, ezi omume na agwa. Gịnị mere ihe otiti ya na ebe a na ọdọ ọkụ?
Eze wee sị: Ọ dịghị mkpa otú ezi ihe ọ bụ, na ọ bụ n'ebe a n'ihi na ya ekweghị na Chineke ebighị ebi. Mgbe ahụ hụ nwoke ọzọ bụ onye na-yi a agha edo na a nnukwu ọnya ya n'obi. Na m jụrụ, onye bụ nwoke a? Eze wee sị: Ọ bụ Aung San, onye ndú mgbanwe ke Myanmar. Ọ bụ ebe a n'ihi na ọ na-akpagbu na gburu Kraịst, ma mbụ ọ na-ekwetaghị na Jizọs Kraịst!
We hu mgbe e kere eke onye chore bụ ịnọgide na-enwe ọkụ ọdọ ọkụ. Ọ bụ egwu na-ahụ, na jụrụ, sị: Ị ga-aga n'ime Lake of Fire? Ọ dịghị, m ebe a na-edebe, 'm kwuru. O kwuru, sị: Ị na-na na nri, m nwere ike ịhụ gị aha ebe a. Ị ga-aga azụ ụzọ ị bịara.
M nọ na oké ihe mgbu, na-eje ije ruo mgbe m bịara a crossroads na a dum ụzọ na ekpe na a nta ụzọ nri. The ihe ịrịba ama n'aka ekpe bụ maka ndị na-adịghị kwere na Jizọs Kraịst, na nta ụzọ bụ maka ndị kwere ekwe na Jizọs. M jere ije na warara, hụrụ otu nwoke a na-acha ọcha uwe mwụda ma nụrụ ebube songs. M jụrụ, Gịnị bụ aha gị?
Mgbe ugboro 6. ọ zara, sị: Abụ m onye na-esetịpụ isi heaven. Ọ bụ a mara mma nke ukwuu ebe. Ị nwere ike ghara ịga n'ebe ahụ ugbu a ma ọ bụrụ na ị na-eso Jizọs Kraịst i nwere ike na-aga ebe mgbe ndụ dị n'elu Aha nwoke ahụ bụ Pita na ọ sịrị: Go azụ ebe ị batara, okwu na ndị na-efe Buddha na chi. Ha ga-aga hell ma ọ bụrụ na ha adịghị agbanwe agbanwe. Ndị na-ewu ụlọ nsọ, na arusi nile, ma na-enye onyinye a na-mọnk maka n'uru ha ga-aga hell. All ndị na-ekweghị na Jizọs Kraịst ga-aga Hell!
Pita gwara m ka m laghachi ụwa na-agba akaebe na ihe m hụrụ. Ị-aha ọhụrụ, ị ga-akpọ Paul ndị bịara dịghachi ndụ! M ga-aga azụ, ma Pita soro m tinyere a n'ọkwá si heaven.
The laghachi Earth, na mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ
N'ebe ahụ ka m maara bụ na ụda nke na-eti mkpu, na nụrụ m na nne tie: My Ọkpara, My Ọkpara ya. Gịnị mere na ị na-ahapụ anyị? M nụrụ ọtụtụ ndị ọzọ na-ebe ákwá. M hụrụ na m dina na a akpati ozu na malitere metụ m aka. My nne na nna malitere iti mkpu, ọ dị ndụ, ọ dị ndụ! Ndị ọzọ na-ekweghị m nne na nna.
M na-etinye m na aka na akpati ozu n'akụkụ ma nọdụ eguzozi. Ọtụtụ ndị ụjọ na mkpu: Ọ bụ Mmụọ, na efehe dị ka ngwa ngwa dị ka ha nwere ike. Ndị nọgidere na-ekwu okwu na-ama jijiji. Ọ bụ a mmiri mmiri na si afọ m na n'ime akpati ozu, na ihe mere ndị mmadụ maara na m nwere n'ezie nwụrụ.
M bụ nnọọ ahụ banyere na-kpọrọ ozu ya ọkụ na elflammor, mgbe nna m na nne hụrụ ahụ m oge ikpeazụ tupu emechi mkpuchi na obi ọkụ. Mgbe m malitere ịkọwa ihe m hụrụ, ma ndị mmadụ na-anya m gwara nwoke ahụ m hụrụ na ọdọ ọkụ, nakwa na ọ bụ naanị Kraịst maara eziokwu. The nna nna na anyị anọwo na-aghọgbu na 1000 afọ, na ihe nile anyị na-eme bụ ụgha. Ndị mmadụ maara ihe ụdị a mọnk m bụbu, otú ọkụ n'obi m bụ Buddahs Learning.
Comment ihe mere mgbe ya uppstådelse na ọrụ
Mgbe Paul na nloghachi ndụ na ahụmahụ nke a, ọ nọgidere na-ekwesị ntụkwasị obi àmà Jehova. Burmes ozi gwara anyị na o mere 100 na nke ndị ọzọ ndị mọnk na okwukwe na Kraịst. Akaebe ya doro anya ma dị isi ike, na nwere kpasuru iwe ọtụtụ ndị na-enweghị ike ịnabata na e nwere nanị otu ụzọ na-heaven, Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. Mgbe ọtụtụ afọ nke siri ike na-eso ụzọ nke Buddha ozizi, o kwuru, ozugbo ahụ, ozi ọma banyere Kraịst.
Ihe ọ bụla ọ mụtara n'oge ndị ahụ n'ụbọchị atọ n'ime ili ahụ kpam kpam ọhụrụ ya. Ọ-adịghị atụ ụjọ na-agba akaebe emewo ya mkpọrọ dịkarịa ala otu ebe, ndị ọchịchị na-emezughị ka ọnụ mechie ya. Mgbe a tọhapụsịrị ya o wee na-agba akaebe na ihe ndị ọ hụrụ ma nụ. Ya ugbu a ebe a na-amaghị, a burmes kwuru na ya nọ n'ụlọ mkpọrọ na o nwere ike ịbụ na e gburu. Enn ọzọ kwuru na ọ bụ free na-aga n'ihu ya ttänst.